अघि बढ्यो ‘लुम्बिनी स्मार्ट सिटी’को योजना, lumbinitimes - ICT Frame Technology
अघि बढ्यो ‘लुम्बिनी स्मार्ट सिटी’को योजना, lumbinitimes
Repoter Chiranjibi Adhikari August 9, 2016 August 9, 2016
लुम्बिनी । सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को रुपमा विकास गर्न काम अघि बढाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयां शहर आयोजनाले लुम्बिनी सहित निजगढ र पालुङ्टारलाई समेत स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न परामर्सदाता छनोटका लागि सूचना जारी गरेको छ । छनोट हुने परामर्शदाता कम्पनीले संसारका महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटीहरुको गुरुयोजना बनाएका विज्ञहरुको सहयोगमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
परामर्शदाता कम्पनीले लुम्बिनी,निजगढ र पालुङ्टारमा बन्ने स्मार्ट सिटीको मापदण्ड बनाउने,आधाररेखा बनाउने,गुरुयोजना तयार पार्नेे,२० वर्षे रणनीति बनाउने र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पार्नेछन् । यो सवै काम परामर्शदाता कम्पनीले आगामी १० महिनाभित्र पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्मार्ट सिटीको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको नयाँ शहर आयोजनाका प्रमुख चक्रवर्ति कण्ठले बताए । कण्ठका अनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्र लुम्बिनीमै कार्यान्वयन डिभिजन कार्यालय राखेर स्मार्ट सिटीको काम अघि बढाउने तयारी छ । सम्भवतः परामर्शदाता कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि देखि नै स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक पर्ने फराकिला सडक,ढल निकास लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइने छ ।
सरकारले बन्दीपुर,डुम्रे,गोर्खा,अमरगढी, दुल्लु,वालिङ् लगायतका ११ वटा शहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी शहरहरुलाई समेत स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना बजेट भाषणमै घोषणा गरेका थिए । यी शहरहरुको डिपिआर र गुरुयोजना निर्माणका लागि प्रति शहर डेढ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
के–हो स्मार्ट सिटी ?
सामान्यतया ‘स्मार्ट सिटी’ भनेको त्यस्तो सहर हो, जहाँको भौतिक संरचना, दीर्घकालीन निर्माण, सञ्चार र बजार अत्याधुनिक हुन्छ । यसलाई पूर्ण व्यवस्थित शहरकोे रुपमा परिभाषित गरिन्छ । आधुनिक शहरमा आवश्यक पर्ने कुनैपनि विषय नछुटेको शहरलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ । यस्तो सहरमा सूचना प्रविधि प्राथमिक पूर्वाधार हुनेछ र यसैमार्फत यहँँका बासिन्दालाई सेवा दिइन्छ । यहा“ अटोमेटिक सेन्सर र डाटा सेन्टर हुनेछन् ।
स्मार्ट सिटीमा अटोमेटिक ट्राफिक संकेत हुनेछन् । सहर ठुलो भएपछि सबैभन्दा ठुलो समस्या सवारी व्यवस्थापनमा हुने भएकाले यस्तो समस्या समाधान गर्न स्वचालित रूपमा सवारी साधनलाई निर्देशन गर्ने संयन्त्र स्मार्ट सिटीमा हुन्छ । यस्तो सहरमा निजीलाई भन्दा पनि सार्वजनिक सवारीलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ र यहा“ पनि सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिएको हुनेछ ।
साथै, कुनै सवारी दुर्घटना भए बटन थिचेपछि उद्धारका लागि सूचना सम्बन्धित निकायमा जानेछ । यसबाहेक, सहरका हरेक कुनामा सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछन् र कन्ट्रोल रुममा बसेर सहरको गतिविधि निगरानी गर्न सकिनेछ ।
अर्को विशेषता भनेको डाटा सेन्टर हो । यस्ता केन्द्रहरूमा सहरबारे हरेक सूचना उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी, अपराधीको पहिचान गर्न ‘फेस आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ हुनेछ । संदिग्धको फोटो र डीएनए कम्प्युटरमा राखेलगत्तै उनको विगत र अपराधका बारेमा तुरुन्त जानकारी लिन सकिनेछ । पार्किङका लागि मानिसहरूले यताउता भौतारिनुपर्ने छैन । कुनचाहि पार्किङ स्थलमा ठाउ“ छ भन्ने जानकारी गाडीमै पाइनेछ । यसले प्रदूषणलाई समेत घटाउनेछ ।
स्मार्ट सिटीमा टेली उपचारको प्रयोग व्यापक हुनेछ । चिकित्सकलाई देखाउन लाइनमा घन्टौं बस्नुपर्ने छैन । घरमै बसेर विशेषज्ञ उपचार हासिल गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, सडकमा विशेषखाले बत्ती हुनेछन्, जसको चमक सा“झ, राति र बिहानमा आवश्यकअनुसार फरक–फरक हुनेछ ।
हरेक घरमा पानी र बिजुलीको खपत कति भइरहको छ भन्ने कार्यालयबाटै हेर्न सकिनेछ । यस्ता सहरमा फोहोर व्यवस्थापन पनि अत्याधुनिक हुनेछ । शहरको कुन ठाउ“मा फोहोर थुप्रिएको छ भन्ने हेर्न सकिनेछ ।
स्मार्टफोन एप्लिकेसनबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ट्याक्सीलाई घरसम्मै बोलाउन सकिनेछ । पानी, पार्क र हरियालीले सुन्दर र आकर्षक मात्रै होइन पूर्ण वातावरण मैत्री हुनु पनि ‘स्मार्ट सिटी’को अर्को विशेषता हो । जनता, सरकार, अर्थतन्त्र,आवागमन,वातावरण र जीवनस्तरलाई स्मार्ट बनाए सिंगो शहर स्मार्ट बन्ने मान्यता छ ।
संसारमा न्यू योर्क, फ्रेन्च सिटी,लण्डन, बार्सिलोना, सिंगापुर, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो र कोपनहेगन लगायतका शहरहरु ‘स्मार्ट सिटी’को रुपमा विकास भइसकेका छन् ।
कसरी गरियो स्मार्ट सिटीको परिकल्पना ?
सन् २०१२ मा ‘लुम्बिनी शान्ति शहर’को गुरुयोजना बनाउने जिम्मा पाएका कोरिएन प्रोफेसर क्वाक याङ्गुनले लुम्बिनी शान्ति शहर एउटा ‘स्मार्ट सिटी’को रुपमा तयार हुने बताएका थिए ।
यद्यपि उनले आफ्नो गुरुयोजनामा यो शहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा भन्दा बढी पिस सिटीकै रुपमा चिनाउन चाहन्थे । ‘क्वाकले बनाएको लुम्बिनी शान्ति शहरको गुरुयोजना एउटा स्मार्ट सिटी कै परिकल्पनामा आधारित छ’ –लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराइले भने । भट्टराइका अनुसार आधुनिक सूचना प्रणालीका सवै संयन्त्रहरुको परिकल्पना, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित शहरको रुपमा ‘लुम्बिनी शान्ति शहर’लाई अघि सारिएकाले लुम्बिनी शान्ति शहर नै स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास हुन सक्छ ।
तर प्रोफेसर क्वाकले आफ्नो गुरुयोजना तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको केही समयपछि सरकारले लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने महत्वकांक्षी योजना घोषणा गरेको थियो । यस्तो योजना घोषणा हुँदा लुम्बिनी शान्ति शहरको गुरुयोजनाका विषयमा भने सरकारले केही बोलेको छैन ।
लुम्बिनी ‘स्मार्ट सिटी’ कि ‘पिस सिटी’ ?
लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति शहरको रुपमा विकास गर्न कोरियन प्रोफेसर क्वाक याङ्गुनले गुरुयोजना तयार पारिसकेका छन् । कमलको फूलको आकारमा तयार पारिएको उनको गुरुयोजना निकै लोभलाग्दो छ । अत्याधुनिक शहरको परिकल्पना गरिएको यो गुरुयोजनाले लुम्बिनीलाई शान्ति र आध्यात्मिक मात्रै होइन अत्याधुनिक स्मार्ट सिटीकै रुपमा विकास गर्ने योजना स्पष्टसँग तयार पारेको छ ।
वर्षौ लगाएर तयार पारिएको लुम्बिनी शान्ति शहरको यो गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि क्वाक आफै सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुन समेत यो गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि उत्सुक छन् । सरकारले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन आफु तयार रहेको क्वाकको भनाई छ । यतिसम्म कि आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि नै यो गुरुयोजनाको शीलान्यास आफ्नेै हातबाट गर्न इच्छुक रहेको गोप्य सन्देश समेत महासचिव मुनले नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छन् ।
तर सरकारले क्वाकको यो गुरुयोजनालाई वेवास्ता गर्दै हतारमा स्मार्ट सिटीको अर्को योजना अघि सारेर कार्यान्वयनको प्रकृया समेत शुरु गरेको छ । क्वाकको गुरुयोजना अध्ययन गरेका नेपाली प्राविधिकहरुले शान्ति शहरको गुरुयोजनालाई नै स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न सल्लाह समेत दिइरहेका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ इन्जिनियर सरोज भट्टराइले सरकारले अघि सारेको ‘स्मार्ट सिटी’ लुम्बिनी शान्ति शहरको गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया हुनसक्ने आशंका गरे । क्वाकले अघि सारेको ‘लुम्बिनी शान्ति शहर’ सरकारले भनेको ‘स्मार्ट सिटी’ संग मेल खाने दावी उनको छ ।
तर रुपन्देहीका विकासे आयोजनाहरुमा विशेष चासो र पहल राख्ने सभाषद्, नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने ‘स्मार्ट सिटी’को परिकल्पना क्वाकको गुरुयोजना भन्दा बाहिरबाट आएको दावी गर्छन् ।
पौडेलले रुपन्देहीलाई विकासमा मुलुककै नमुना जिल्ला बनाउने अभियान अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको बताए । उनले लुम्बिनीको महत्व र सम्भावनाहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर लुम्बिनीमै ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने कुरामा सरकार तत्पर रहेको दावी गरे ।
‘क्वाकले पनि शान्ति शहरको परिकल्पना गरेर एउटा सुझाव सहितको प्रस्ताव ल्याएका छन्,त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने,नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ’– नेता पौडेलले भने ।
तर क्वाकको शान्ति शहरको गुरुयोजनासंग ‘स्मार्ट सिटी’को कुनै सम्वन्ध नरहेको उनले दावी गरे । पौडेललका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा व्यक्तिकोे नीजि जग्गा लिएर सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’का लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नेछ ।
सम्भव होला त लुम्बिनीमा ‘स्मार्ट सिटी’ ?
सन् १९७८ मा जापनीज वास्तुकलावीद् प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले बनाएको लुम्बिनी गुरुयोजना तत्कालिन समयमा निकै महत्वकांक्षी मानिएको थियो । सरकारले करिव ३५ वर्ष मा उनको गुरुयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकेको छ । टाङ्गेको गुरुयोजना आफैमा भव्य र सुन्दर छ । यो गुरुयोजनाले लुम्बिनीको जम्मा १ सय ७७ विगाहा क्षेत्रफल मात्रै ओगटेको छ । यसले लुम्बिनीका प्राचीन पुरातात्विक संचरनाहरुको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रभित्र मात्रै होइन वाहिर समेत ब्यवस्थित शान्त र समृद्ध शहरको परिकल्पना उनले गरेका छन् । तर टाङ्गेले बनाएको गुरुयोजनाले भित्र बसेका स्थानीयलाई बाहिर समेत व्यवस्थित रुपमा बसाल्ने ठोस प्रस्ताव ल्याएन जसका कारण स्थानीय वासिन्दा सधै लुम्बिनी र लुम्बिनी विकास कोषप्रति असन्तुष्ट रहदै आए । लुम्बिनी भित्र जति सुन्दर बन्दै गयो वाहिर झन् अव्यवस्थित ।
यति सेरोफेरोमा केही वर्षअघि लुम्बिनीमा चिनिया“ लगानी ल्याउने उद्देश्य सहित ‘एपेक’ नामक परियोजना अगाडी सारियो । यो परियोजनाले पनि लुम्बिनी क्षेत्र वाहिर आधुनिक र सूचना प्रविधिले भरिपूर्ण शहरको परिकल्पना गरेको थियो । यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लोकप्रियताका लागि यस्तो योजना अघि सारेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि उनी त्यसवाट पछि हटे ।
त्यसपछि लुम्बिनीलाई ग्रेटर लुम्बिनी बनाउनुपर्ने प्रस्तावहरु आए । तर ग्रेटर लुम्बिनीको परिकल्पनालाई साकार पार्न खास कुनै गुरुयोजना बनेन ।
त्यही विचमा कोरियन प्रोफेसर क्वाकले लुम्बिनीलाई संसारकै नमुना शान्ति शहर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए । सरकारको अनुमति पाएपछि कोरियन सहयोग नियोग (कोइका)को सहयोगमा प्रोफेसर क्वाकले सुन्दर र शान्त शहरको गुरुयोजना तयार पारे ।
तीन अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमा यस्तो शहर बनाउन सकिने योजना उनको छ । उनको गुरुयोजनालाई लुम्बिनीवासीले निकै मन पराएका छन् । तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा खासै चासो देखाएको छैन । स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागिता विना शान्ति शहरको योजना बनेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । यद्यपि लुम्बिनी संसारकै नमुना, सुन्दर, शान्त र ‘स्मार्ट शहरको’रुपमा विकास हुने दिशामा अघि बढेको विज्ञहरु बताउंछन् ।
लुम्बिनी एउटा शान्त र पवित्र ग्रामको रुपमा विकास भइसकेकाले अहिलेको लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रलाई नै ‘स्मार्ट पिस एरिया’ बनाउन सकिने धारणा पर्यटनविद् रामचन्द्र सेंढाइको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङ्ले पटक–पटक नयां योजना अघि सारेर गुरुयोजना बनाउने नाममा पैसा खर्च गर्नुभन्दा क्वाकको गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । यद्यपि लुम्बिनीमा अर्को ‘स्मार्ट सिटी’को परिकल्पना आफैमा राम्रो भएको टिप्पणी उनको छ ।
लुम्बिनीविद् डा. गितु गिरीले लुम्बिनीमा ‘स्मार्ट सिटी’को परिकल्पना प्रोफेसर क्वाकले गरिसकेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु सवैभन्दा राम्रो हुने बताए । तर क्वाकको परिकल्पनामा भव्य कंक्रिट शहरको परिकल्पना नभएकाले अर्को कुनै ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भए लुम्बिनीदेखि टाढा बन्नुपर्ने धारणा उनको छ ।
नया“ शहर आयोजनाका प्रमुख चक्रवर्ति कण्ठले क्वाकको गुरुयोजनाका विषयमा आयोजनामा कुनै छलफल नभएपनि सोही गुरुयोजनालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने नीतिगत भए धेरै छिटो र सजिलो हुने धारणा राखे । उनले सरकारले लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने क्वाककै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुने धारणा राखे ।
Previous Post Previous post: शिक्षा प्रविधिको आयोजनामा जर्ब फाउन्डेसन वर्कसप सम्पन्न
Next Post Next post: महावीरको अभियानमा इनोभेटिभ युथ मुभमेन्टको आर्थिक सहयोग
एपहरु प्रयोगकर्ताले निशुल्क रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने
surencool4 February 19, 2016
Yomari CAN Softech 2017 Kicks off today
Repoter Chiranjibi Adhikari January 6, 2017 January 21, 2017
नेपालको सूचना प्रविधि क्षमतालाई अन्तर राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने
surencool4 February 22, 2016
भाँडोमा फोहोर फ्याँकेमा सित्तैमा वाइफाइ सुबिधा